Alshabaab oo ku guulaystay inay joojiyaan Adeegii 3-aad ee ay bixiso Shirkadda Hormuud. – Hornafrik Media Network
Kooxda Alshabaab ayaa ku guulaystay inay joojiyaan Adeegii 3-aad ee ay bixiso Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud. Waxaana gabi ahaanba ay Hormuud hakisay Fariimihii ay soo diri jireen Iddaacadaha Muqdisho ee Wararka ay kula wadaagi jireen Macaamiishooda haysata Taleefoonadda Hormuud.
Inkastoo aysan Hormuud si rasmiya u shaacin sababta ay u joojisay Fariin Wareedyaddii ay heli jireen Dadka is diiwaan galiya ee haysta Taleefoonadooda haddana Xog ay heshay Hornafrik waxay ku ogaatay in Kooxda Alshabaab ay ku amartay Shirkadda inay Wararka Iddaacada Afka Kooxda ku hadasha ee Andulus u oggolaato in lagu diro Fariin Qoraaleed, Laakiin ay Hormuud arrintaasi uga cudur daaratay Kooxda, sababo la xiriira qatar ka soo wajihi karta Dawladda Somalia. kadibna waxay Kooxdu amartay in gabi ahaanba adeegan hawadda laga saaro.
Adeegan ay bixiso Hormuud ayaa Macaamiisha is diiwaan galiso waxay bixin jireen Bishii 1 Dollar, Waxaana Lacagtaasi 50% qaadan jirtay Shirkadda Hormuud, 25% Shirkadda Tabaarak ICT oo ah laan ka tirsan Hormuud, 25% Iddaacadda Warka diraysa. Waxaana ka mid ahaa Iddaacadaha Adeegan isticmaali jiray Radio Muqdisho, Radio Kulmiye, Radio Goobjoog, iyo Radio Dalsan.
Hormuud waxay horay u joojisay Adeegyaddii Zaad Service ee lacagaha la isugu xawili jiray, Adeegii Internet-ka Mobile-da, kadib Awaamiir ugu yimid Kooxda Alshabaab.
Ma jirto wax war ah oo ay arrintan ka soo saartay Dawladda Somalia.